Ngokwe-Statista, iSpapchat yafika Abasebenzisi abasebenzayo be-200 ngoSeptemba 2016. Isiseko stundumebenzisi wase-BNA sinokulindela 37% yabasebenzisi kwiqela le-18-24 yobudala (ngoFebhuwari 2016), ngelixa ukuti kuku, ne 56% ye-Whatsapp kunye ne-51% ye-Facebook.
1 I-Snapchat "I-tölublað", flökt í i-efni
2 Ngoko, Yintoni eSebenza kwi-Snapchat?
3 1. Ukukhawuleza kunye nokuHlangana kubalulekile
4 2. Hamba Usebenza Ngendawo Endaweni Yokusebenza
5 3. Okungalibalekiyo
6 4. Bambisana Nabashushu
8 6. Ukuphuhlisa i-Brand Trust ne-Livestreaming
9 7. Ukunikezela nge-Freebies kunye ne-Giveaways
10 8. Fumana Abalandeli (Ziyimpawu Zomsebenzi Wentengiso)
13 Ukuze Sifumene …
I-Snapchat "I-tölublað", flökt í i-efni
I-Snapchat isebenza kwinkqubo yokuthumela imiyalezo "yokulahlwa", oko kuthetha ukuba umyalezo uhlala malunga nemizuzwana ye-10 emva kokuba umsebenzisi uyifunde. Oku kuqinisekisa ubumfihlo, kodwa indlela yokusebenzisa isityalo esinjalo sokuthengisa?
Unokwenza ngokubaluleka komnye:
Sebenzisa imiyalezo yangempela endaweni yokwakha ngokucokisekileyo.
Zisebenzise amathuba okuphuhlisa isiphambano phakathi kwazo zonke iziteshi zentlalo.
Ngokomzekelo, jonga indlela ama-Audi aphatha ngayo imizamo yentlalo kunye no-Snapchat:
Audi Snapchat kwiSunday Bowl ngeCawa ku enkulu á bedlala.
Ngo-Matshi 2016, uMark V. Schaefer wabhala "umbono olinganiselayo" kwiStapchat yokuthengisa apho azisa khona iingxaki ezibini ezinkulu ngeSpapchat:
Ubunzima bokuthi "kwakhiwe abaphulaphuli abachaphazelekayo."
"Umngeni wokudala umxholo oqhubekayo, onokuthenjelwa, onokuthi unomdla ogqithisekayo ungabonakala."
I-Schaefer izisa iinzame zikaDisney zokukhuthaza iipaki zayo zomxholo njengomzekelo, echaza indlela abadumileyo abaqeshisa ngayo nabadwebi be-Disney ukuba basebenze kumxholo wentengiso, kodwa wonke loo msebenziimbatn.
Umkhankaso we-Disney unokugwetywa njengempumelelo kuba ngoncedo lwabantu abanobuchule be-Snapchat, i-akhawunti ithole abalandeli abatsha be-50.000 ngosuku. Kodwa ngoku? Yintoni eyenzekayo xa abo baqashiweyo abadumi beza kuhamba? Ngaba ngaba abaphulaphuli abatsha baya kuvuyiswa ngevidiyo ze-10 ze sibini zee-prinsessa ze-Disney? I-Snapchat ayikwazi ukuba yinye kwaye yenziwe. Xa kuthelekiswa nezinye iziteshi zentlalo, umngeni wokuncedisa iilwanyana ngokufanelekileyo, umxholo wokuphefumula unzima.
Kodwa konke oko kuguquguquka komxholo (kunye nomzamo) ukongeza enye ‘i-con’ kwi-Snapchat: akukho zibalo zifumanekayo emva kweeyure ze-24 ukusuka ekushicileleni, kwaye akukho ukufikelela kwimbali yomxholo isigxina.
Ewe, ezi ngxaki (eziyinxalenye ‘yephysology’ ye-Snapchat) zongeza umda owenza ukuba isibhengezo sokuthengisa singaphantsi njenge-2016. Ngelixa ucelomngeni ngokuqinisekileyo malunga nohlahlo-lwabiwo mali, izixhobo kunye nomonde, ukhuphiswano olusezantsi lwenza namathuba aphezulu okufumana umyalezo wakho ngaphandle kwengxolo enkulu.
Ngoko, Yintoni eSebenza kwi-Snapchat?
Nayi imigaqo ebalulekileyo ye-10 ye-snjall (kwaye isebenzayo) ukuthengiswa kwe-Snapchat. Ndacela abathengisi abasebenzisa i-Snapchat kwimisebenzi yabo yokuthengisa ukuze babelane ngeengcebiso kunye namava abo, ukwenzela ukuba ufumane uluhlu olubanzi lokuthengiswa kwe-Snapchat ngokunokwenzeka.
1. Ukukhawuleza kunye nokuHlangana kubalulekile
Umxholo we-Ephemeral wenza ukuba kubaluleke kakhulu ukubeka unxibelelwano phambi kobuhle bezikhundla zakho kwi-Snapchat – ixesha labo lokuphila lifutshane kakhulu ukuba nayiphi na into eyandisiweyo ngakumbi iya kuba holo.
Ukusebenzisana apho ungayinqoba khona – ukujonga kuqala okanye i-teasers yomkhiqizo, iimemo ze-Q / A, amakhuphoni, kunye nemincintiswano yimiba yonke imisebenzi yokuthengisa enokusetyenzana enokukuzisa izipapchoo.
U-Becca Booth, umongameli I-Trout Marketing, ucebisa ukuba "usebenzise [i-Snapchat njenge- ‘fowuni yeshishini’ ekhethekileyo yombutho wakho vs iakhawunti yakho, kwaye unike abasebenzi bafake izinto zovuyo imini yonke. Ég-Snapchat ályktar kukulu ‘ukucocwa’ kunenye til að fá ekuthengiswa kuyo – Yinyani kwaye ayihlelwanga ngokugqithileyo. "
U-AJ Saleem ungumnikazi wekampani yokufundisa yokuqalisa, I-Suprex leiðbeinendur Houston, kwaye usebenzise iSpapchat ukuthengisa ishishini lakhe kubaxhasi bakhe bamanje:
Isitshixo ekuthengiseni ngempumelelo kwi-Snapchat kufumana í enomdla kodwa ifutshane. Nangona ufanele ubonise iinkalo zeshishini, bonisa kuphela izixhobo ezichaphazelekayo kumboleki.
Kubalulekile ukufumana ithagethi yakho kwaye icace gca kwimixholo owabelana ngayo, ukuze bakhuthazwe ukuba basebenze "ngoku", nge-CTA ebukhali kakhulu, engafakwanga flensa, kwaye batsaleleke kwezona njongo ziphambili.
Njengomzekelo, kuba izibalo zibonisa ukuba uninzi lwabasebenzisi bakaSnapchat lulutsha kunye nabantu abadala abancinci abaneminyaka eyi-15-24, onokuyenza kukuhlalutya iimfuno zabo kunye neminqweno yokuqambi umyoulezo ojoaleo Ukubonelela ngeencwadana zexabiso eliphantsi zekholeji, izaphulelo kunye nee-freebies zonke ziyimizekelo elungileyo yale ndlela.
2. Hamba Usebenza Ngendawo Endaweni Yokusebenza
UMax Robinson I-Ace vinnutæki Bretland Uxelela ukuba enye into kunye neqela lakhe "bahlala bezama ukugcina kunye no-Snapchat isimo sengqondo esichukumisayo, kuba oko kusebenza ngokusemgangathweni kwiplatifomu."
Ewe kunjalo, kuba ubomi bemixholo mfutshane kakhulu kangangokuba kungenzeki ukuba kucwangciswe kwangaphambili njengakwenye imidiya yentlalo, í ephambili kwi-Snapchat kukuhlala ufumaneka ukuze udibane kwaye uphendule ngokukabasza kwzi.
URobinson wabelana ngeengcebiso ezimbalwa zokuceba:
Asenzi sicwangciso seveki ngokwento esiya kuyithumela kunye nexesha esifuna ukugxila kulo kwimixholo yosuku ukuqinisekisa ukuba ihlala ifanelekile. Ukudala iifilitha zakho, ngakumbi ukuba zibandakanya uphawu lwakho, kubalulekile kwaye yeyona ndlela ingcono yabanini bamashishini yokufaka uphawu lwabo kwimixholo yabo ye-Snapchat.
Ekugqibeleni, uRobinson uyabelana, ukuba ufuna ngokwenene ukuphuhlisa ubunikazi kwi-Snapchat, "Musa ukoyika. Ungoyiki ukuthumela ifoto. Musa ukoyika ukuthumela ividiyo. Ukuba uthengisa iziqulatho ezilungileyo kwaye uchithe ixesha ufunda isijelo, uphawu lwakho luza kuphumelela. "
"Yenza umxholo ongakhohlwayo," kutsho Timmy Griffin, I-SEO kunye nomcebisi wokuthengisa nge-Frábær meindýraeyðing. "Unemizuzwana embalwa ukufumana ingongoma yakho. Ungesabi ukuma ngaphandle. Tshela uluntu ukuba ungubani kwaye uyintoni na. "
IGriffin ibelana ngamagama angundoqo amagama (izenzo) ekudaleni inxaxheba kwi-Snapchat:
bandakanya: Sebenzisa ama-akhawunti akho akhona netmiðill ukuze wenze ulwazi kunye nomdla.
[Yiba] ekhethekileyo: Ukubonelela ngokufikeleleko kunye nomxholo wokufumana abahlobo bakaSpapchat.
Landela Umva: Qedela ibali lakho ngesicelo sokukudibanisa namanye amanxibelelwano asekuhlaleni.
Zonke ezi zinto zenziwa ngokusekelwe ‘kwiikhampasi’ eziphambili zentengiso esebenzayo kwi-Snapchat: ukukhawuleza nokunxibelelana (jonga imigaqo # 1 kunye # 2), kodwa uGriffin ukwabelana nezinye izintoeka kúzúthúka
1. Thumela ama-snapchats: Abafundi beekholeji banomdla wokuvula i-snapchat yakho kwi-vörumerki.
2. Nika ifowuni kwisenzo: Ukunikezela isaphulelo okanye ukhuphiswano; Izifundo zibonisa ukuba i-67% yabafundi beekholeji bayathanda ukufumana enye.
4. Bambisana Nabashushu
Ukukhula komsebenzisi kwe-Snapchat ukusukela kwi-2014. Umthombo: Statist
UTeeeece Gordon kwiSebe lokuthengisa Kumo Digital Uyavuma ukuba uSnapchat "ayisiyo indawo yokufaka imveliso yakho yamva nje", kodwa enye apho "abasebenzisi be-app bafuna ukonwatyiswa", ke ukonwaba yinto ekufuneka uyenzile ukuba ufuna ukubandakanyeka kwisitishi sakho se-Snapchat.
UGordon uchaza ukuba "enye yezindlela eziphambili zokwenza oku (kunye nomnye onokungqinelwa ukusebenza) kukusebenzisana nabachaphazeli. Cinga nge-nich yakho kwaye nokuba ungayifaka le nto njengenxalenye yesicwangciso. Ngokomzekelo, masithi uthengisa ukwakheka. Kukho iibragizi ezimbalwa kunye nabavloggers ngaphandle apho baninzi. "
Emva kokuba unamagama ambalwa, ukufikelela kumafuthe aze athethe. UGordon ukwabelana ngeengcamango ezimbalwa:
Ngokumema omnye wabo ukuba athathe ixesha elide okanye atyelele indawo yakho, abalandeli babo bangaqaphela uphawu lwakho njengelinye abangayisebenzisa, kwaye badibanise nawe kwikamva. Yitsho i-kvakar yakho iqabane kubalandeli babo í enjengokuthi "Ndiyithatha le nkampani yeSpapchat yosuku. Yiza ufumane apha [Igama lomsebenzisi] ukuze ubone oko kwenzekayo. "Uyakwazi ukuthabatha iindwendwe ezimbalwa ngaphambi kokuba imisebenzi iqale. Isicwangciso esicacileyo nesiqulatho somxholo ukusuka apho kwaye isibhakabhaka sinokuba ngumda.
Sean Martin, umphathi wokuthengisa umxholo kwi I-Director Consulting Uthi inkampani yakhe iye yazama ulwahlulo oluhlukeneyo loluntu, ukuhlalutya amandla alowo nalowo, kwaye "apho ezinye iindlela zobuqili zentlalo zilungele ukwandisa ukuguqulwa kwakho kunye nokuthengiswa, i-Snapchat ibonakala yithuba elihle lokuphuhlisa ukuqatshelwa kweentengiso kunye nemveliso yakho. . Sebenzisa i-Snapchat njengenxalenye yesistim se-trekt ukuze abasebenzisi abasebenzisa iselula bavuyiswe kwaye badibanise ne-brand yakho. "
Inkampani kaMartin ifumanise ukuba elona qhinga lihle ngale ndlela “kukulungelelanisa imikhankaso yakho ye-Snapchat kunye nomcimbi wasekhaya okanye imicimbi yezasekuhlaleni.” UMartin ucacisa ukuba iinkampani "zinakho ukwenza ngokwezifiso kwaye zihlawule ukuxhasa ngezimali i-Snapchat eyahlukileyo. geofilters, ukuba unokwenza i-radius ethile. "
Ukusebenzisa ii-geofilters kubonakala kusebenza kakuhle-isicwangciso kwazisa uAlex Kehr ngaphezu kwe-200k imbono ejoliswe kuyo kunye ne $ 15.33 $:
Esikhundleni sokuhlawula amawaka eedola ukuze kuxhaswe isiganeko, unokudala I-geofilter yesiko (Eya kuza kuxhaswa ngu- [your_company_name] APHA ngasezantsi), kwaye usethe I-radíus ngokukhawuleza kweso siganeko ukufumana abasebenzisi abaselula usebenzisa icebo Lakho kunye nokudibana ibhendi kunye neenkumbulo zabo zangempela zesiganeko endaweni yegama kuphela.
NgoMike Koehler, umongameli kunye nomlawuli oyintloko Smirk New Media, ISpapchat iye yaba enye yeeplani ezibalulekileyo zokuphatha abaxhasi bakhe. "Uhlobo lwabasebenzisi bokuqukethwe lufuna ukuba lube nolwazi," uKoehler uthi, "kumnandi kwaye (ukuba kunokwenzeka)."
U-Koehler uphakamisa isicwangciso esicacileyo sezinto: "kubonisa emva kweevidiyo ezibonakaliswe ngobuntu kunye nokudibanisa kunye nebali kubalulekile ekuphumeleleni kweSpapchat".
UKoehler uhamba ngokubanzi:
Yenza i-Snapchat ithathe, ukuze abalandeli bakho babone ubuntu obuyingxenye yenkampani kunye nento abayenza ngayo imihla ngemihla. Ukusebenzisa izixhobo zetekisi kwi-Snapchat kunokunyusa nabasebenzisi ukuba bahlolisise umxholo wakho kwezinye iindawo okanye bafune isayithi lakho. Ukudala izihlungi ze-Snapchat zesiko, ngokukodwa kwimveliso enxulumene nemicimbi yokuphila, ibalulekile ngoku. Ufuna abasebenzisi ukuba baða sig inxaxheba kunye nekhredithi yakho kwaye babelane ngayo kwiimveliso zabo – kunye nokusetyenziswa kwefayile ye-Snapchat ngenye yeemitha zamanani ezimbalwa ezenziwa ngu-Snapchat ngoku.
6. Ukuphuhlisa i-Brand Trust ne-Livestreaming
Inkampani yokuthengisa yokudibanisa UkuThengiswa kweWebbMasonUIsake Hammelburger uthi iqela lakhe laqala ngo-Snapchat, kuzo zonke iiplati ezikhoyo, ukunika abaxhasi babo ithuba lokungcola kangako, kwaye "iSpapchat inikeza indlela yokubonisa ég-vörumerki treysta ngaphezu kwanoma yiphina indawo."
UHammelburger uncoma isicwangciso se-Snapchat esichaphazela ukuphuhlisa ukuthembela kwi-vörumerki, kwaye oko kwasebenza kubaxhasi babo:
“Ukusasaza imihla ngemihla umsebenzi wemihla ngemihla unokubonisa abathengi bakho ukuba usebenza njani umlingo. Ngapha koko, komnye wabathengi bethu beekhitshi, sacebisa ukuba baphinde bavule izitshixo zabo. Enkosi nge-Snapchat, bekwazile ukunqanda imiba yokuthemba abanamakhitshi abanamakhitshi, kwaye bongeze iminxeba emihlanu eyongezelelweyo ngosuku ngokomyinge.
7. Ukunikezela nge-Freebies kunye ne-Giveaways
"Yiba neenkcukacha ze-Snapchat kuphela okanye í uppljóstrunum. Sebenzisa i-Snapchat ukuba ifake izinto ezingundoqo ezingabonakali nakwezinye iindawo zokuhlala zentlalo, "kusho uBooth.
Æði, óunginn! Umyalezo osisigxina somyalezo kunye nokufutshane okufutshane nabasebenzisi stöðSpapchat kukunika umzuzu okanye ngaphantsi ukufumana umyalezo wakho.
Kodwa kukho okungakumbi kuyo: kufuneka uyenze ibe nomtsalane kubaphulaphuli abancinci!
"Abantu abajoliswe kuzo bayiminyaka eyi-18-24 ubudala," kusho uTimmy Griffin, "kwaye le nxalenye yeqela labantu lithanda amabali abo. Nika ubuntu bakho kwaye wabelane nabo ngabaphulaphuli bakho. "
IGriffin ichaza ezinye izibalo ezincedo:
I-45% yabafundi beekholeji baza kuvulwa kwi-vörumerki þeir andazi
I-73% yabafundi beekholeji baza kuvulwa kwi-vörumerki þeir beyazi
Awungekhe uqokelele idatha kwi-Snapchat, ke kubalulekile ukuba wenze njalo kwiwebhusayithi yakho: nikezela isazisi okanye ikhowudi kwiphulo ngalinye leo Snedah Nahalahs.
8. Fumana Abalandeli (Ziyimpawu Zomsebenzi Wentengiso)
Njengomnye umba owahlula i-Snapchat kwamanye amaqonga eendaba ezentlalo, abasebenzisi badinga ikhowudi ye-QR okanye igama lomsebenzisi ukuba balahele kuko okanye ukongeza amagama abasebenzisi, kunjalo?).
Kulo nqaku, uJason Parks, umongameli Umphathi weMedia, uncoma ukuba wenze abalandeli njengesinyathelo sokuqala kwiSicwangciso seSpapchat esiphumeleleyo, kwaye ukwenza oko, "kufuneka uxelele amabali amakhulu. Ukuba ungumqondiso, ixesha lixesha eliphambili. Ukuba kukho iziganeko eziphambili ezenzekayo, nxaxheba kwi-atburður kunye nee-geofilters kunye neefoto kunye nevidiyo.
Enye indlela yokutsala abalandeli kubandakanya ukusebenzisa ezinye iziteshi zakho zentlalo kunye nebhlog yakho ukukhuthaza ngamandla iakhawunti yakho ye-Snapchat njengendawo ukuya nokufumana izibonelelo ezizodwaisuayuayuaye kaeyeo yaho yaho yaho yaho yahoo . Kwakhona, kudala u kubalwa isicwangciso esiphumelelayo sokuqinisekisa "abalandeli" ukuba bajoyine uluntu lwakho.
Unako ukuvelisa abalandeli njengommiselo # 8, kódeu kutheni usikelwe umda kwimizamo yakho kwiqonga le-Snapchat kuphela? Okwangoku ufunde ukuba i-Snapchat ayizukubamba iinzame zokuthengisa umxholo ixesha elide, kwaye kummiselo # 3 uGriffin ucetyise ukuba benzisa ezinye iziteshi zentlalo ukunika iSapapchat intshukumo enkuba -lisoela lúbu.
UJason Parks ubonisa ukuba "udlulele i-akhawunti yakho ye-Snapchat kuzo zonke ezinye iziteshi, ngokukodwa i-Instagram Stories," njengeSpapchat Instagram uphawu oluvumela abasebenzisi ukuba bathumele iifoto kunye namavidiyo aphelelwa emva kweeyure ze-24.
Kwakhona, u-Becca Booth uncoma ukuba "usebenzise uphawu lwe-Snapchat kunye nekhonkco yakho ngqo kwi-Facebook lýsing, Instagram bio kunye neprofayile ye-LinkedIn." Oku kuya kunika i-akhawunti yakho ye-Snapchat ngakumbi kwiindlela ezininzi.
IBhooth iya ngakumbi ngokucacileyo kwi:
Yabelana ngemibandela yento abantu abangayilindela ngayo le milambo kunye nokudala imihla ngemihla okanye ubuncinane ubuncinane beveki ukuba abalandeli banokulindela kwaye bafuna ukubona njenge-OOTD (ingubo yosuku) kwisitorethi sokhiqo
Njengomgaqo # 7, Iya Kuba sisicombululo esinamandla kakhulu sokuba nomxholo við-Snapchat kuphela (njengokunikezelwa kwexesha) abafundi Bakho okanye abathengi banokufikelela kuphela kwiqonga Ngokulandela uhlaziyo Lwakho-oluya kunyanzela abasebenzisi abanomdla ukuba bahlangane Nawe KWI-Snapchat ukufumana ezo zinto zinikezelwayo, kwaye ungasebenzisa ezinye iidiya Zakho zentlalo ukwazisa abalandeli bakho malunga nayiphi na í ezayo oza kuyabelana nge-Snapchat.
Mhlawumbi imithetho yangaphambili þér-9 isandi ukuchitha Ixesha kunye nezixhobo Zakho kwaye Ukhetha ukukhetha isisombululo esilula ukuvelisa ukuthengisa kunye ne-umferð esuka eSpapchat, kodwa akusiyo yonke í elahlekileyo-ngelixa iSpapchat yindlela eyahlukileyo yoluhlu loluntu kwaye unokwenza yemithetho ngaphandle kokulinganisela kakhulu kwizixhobo Zakho ezikhoyo, unako ukuhamba ngeentengiso.
Thenga iintengiso ezisuka ku-Snapchat kwaye vumela iqonga lenze okunye. Iintengiso ze-Snapchat azibizi, kodwa ukuba unako ukuyifumana kwaye umxholo wakho wenzelwe ukukhanga abasebenzisi abaselula ukuba bayisebenzise, ​​umzamo unokufanelekile ngemali.
Izinto zeMediakix Izibalo ze-10 Snapchat (2016) ungayifumana iluncedo ukugcina ulungelelaniso lweekhankaso zakho, kunye nalo Isishwankathelo seSpapchat Statist inikezela.
Ukuze Sifumene …
Ég-Snapchat ngokuqinisekileyo iyincoko enzima ukuphazamisa ukuthengiswa kweendaba ezentlalo. Isiqulatho asisoze sigxina, kwaye iinzame zakho zinokubonakala zifana nomsebenzi onqabileyo.
Nangona kunjalo, unako ukufikelela kubaphulaphuli abakhulayo be-Snapchat ngokugcina engqondweni ngala mithetho ephambili yokuthengisa:
Umxholo we-Snapchat u-ephemeral, kodwa usebenzise ngokukhawuleza ukuba uzuze kwi-CTAs ezinamandla, esekelwe kwimvakalelo, umxholo ochaphazelayo, kunye nokuzonwabisa okonwabisayo okubonisa ubuso bomutushuanya obhohanya obbuso obuto.
Indlela engcono yokuqinisekisa abasebenzisi ukuba banakekele umxholo wakho kukubeka umda – yenza ukuba kunqongophala kubangele umdla
Beka intsebenziswano ngaphambi kokuqokelela idatha, uhlale ekhumbula ukuba ithagethi yakho intsha kunye nabantu abadala; ngamanye amagama, zenzeke ngokuthe tye kwiindawo zokusebenza.
Sebenzisa ii-geofilters kunye nentengiso.
Khathalela abalandeli bakho, kuba kufuneka benze umsebenzi othile wokulandela, kwaye ngekhe babenomdla wokwenyani.
NjengoTimmy Griffin uthi,
Yi nyaniso. Amanqaku abelana ngamabali athile asemgangathweni angcono nakwi-Snapchat. Yiba ngokwakho, kwaye wabelane ngexabiso lakho lempawu zentengiso. Unxuwa oluninzi lwe-script u-spontaneity lwe-Snapchat kwaye wenza ukuba ubukho bakho bubonakale buninzi njengentengiso.
Ngokwe-Statista، iSpapchat yafika Abasebenzisi abasebenzayo شود-200 ngoSeptemba 2016. Isiseko somsebenzisi wase-آمریکا sinokulindela 37٪ yabasebenzisi
* Qaphela: Lo nguhlaziyo olutsha lwe-Pinterest útmutató. Utshintsho olutsha kwi-Pinterest kunye namanye amaqiniso /
* Qaphela: Lo nguhlaziyo olutsha lwe-Pinterest vodič. Utshintsho olutsha kwi-Pinterest kunye namanye amaqiniso /
* Qaphela: Lo nguhlaziyo olutsha lwe-Pinterest guide. Utshintsho olutsha kwi-Pinterest kunye namanye amaqiniso /
* Qaphela: Sjáðu leiðbeiningar um Pinterest. Útskrift myndband-Pinterest Aðeins nafn / stykki / óendanlega